Amazwe AseAfrika | Incwadi Yonyaka Ka-2014
ABEMI 979 685 702
ABAVAKALISI 1 363 384
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 3 265 314
“Ngoku Ndingaphuma KwiBhabhiloni Enkulu”
Omnye umfana waseUganda onguThomson, wayenganelisekanga zizinto ezazisenzeka ecaweni. Edikwe kukusoloko efunw’ imali ngabefundisi, wayeka ukuhamba icawa. Sekunjalo, akazange ayeke ukufunda iBhayibhile imihla ngemihla. Incwadi yeSityhilelo yayiyeyona anomdla kuyo, wade wazama nokuchaza intsingiselo yayo kwincwadana abhala kuyo amanqaku. Omnye umzalwana wadibana noThomson emsebenzini wakhe, kwesinye isiza sekhontraki, efunda iBhayibhile. Emva kwengxoxo eshushu ababa nayo, uThomson wamkela incwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Wayifunda yonke ngobusuku nje obunye. Ngosuku olulandelayo, lo mzalwana wafumana i-sms ethi: “Ndibulela iNkosi ngale ncwadi undinike yona. Ngoku ndingaphuma kwiBhabhiloni Enkulu.” UThomson wacela ukufumana zonke iincwadi ezikwimibhalo esemazantsi nakwizihlomelo zale ncwadi. Wayesikhuthalele isifundo sakhe seBhayibhile, ibe wenza inkqubela ekhawulezileyo kuba wabhaptizwa kwiNdibano yeSithili ka-2012 eyayinomxholo othi, “Londoloza Intliziyo Yakho!” NgoMatshi 2013 uThomson waba nguvulindlela othe ngxi, ngoku unceda abanye babone imfuneko yokuphuma kwiBhabhiloni Enkulu.
Wafundelwa Ngabazalwana Abasibhozo
UJimmy wakhulela ePort Louis, ikomkhulu leMauritius. Waqala ukusela xa wayena-16 ibe wayesoloko enxilile. Ngenxa yoko, wayengakwazi ukuzibamba ibe wayesoloko evalelwa entolongweni. Maxa wambi wayesela iibhotile ezintathu zebranti aze atshaye amacuba ayi-60 ngosuku. Xa engenamali wayesela umxube wokucoca iifestile kuba wawunotywala. Wayesela neziqholo zikamama wakhe. Xa omnye umntu wathi kuye wayengathi sisidumbu esihambayo waya kwiziko elinceda abantu babuyele kwimeko yesiqhelo. Wahlala unyaka onesiqingatha apho kodwa akazange ancedakale.
ERodrigues: UJimmy wayezimisele ukutshintsha ubomi bakhe
Ekugqibeleni uJimmy wadibana namaNgqina kaYehova ibe wavuma ukufundiswa iBhayibhile. Maxa wambi, wayeyeka ukufunda aphinde abuyele etywaleni. Ngenxa yoko, wafundelwa ngabazalwana abasibhozo. Ekugqibeleni uJimmy wabona ukuba kufuneka eyitshintshile indlela aphila ngayo. Wathi: “Ndandivakalelwa kukuba ikrele ekuthethwa ngalo kumaHebhere 4:12 lalindihlaba entliziyweni. Ngeny’ imini xa ndandifunda iBhayibhile yam, ndabona iMizekeliso 24:16 ethi: ‘Ilungisa lisenokuwa kasixhenxe, yaye ngokuqinisekileyo liya kuvuka.’ Ubomi bam batshintsha ngaloo mini.” Emva kokufunda nabazalwana abasixhenxe, uJimmy wazimisela ukutshintsha encedwa ngumzalwana wesibhozo. UJimmy wacela amandla kuYehova, waya kwiintlanganiso zebandla waza wohlukana kwaphela nemikhwa yakhe emibi. Wabhaptizwa ngo-2003 ibe waba nguvulindlela ngo-2012. Ngoku usisicaka solungiselelo kwibandla elikwisiqithi saseRodrigues.
“UYehova Neengelosi Baza Kuba Ngabahlobo Bam”
UMary waseKenya, oneminyaka eyi-70 wayelilungu leCawa yaseRhabe ubomi bakhe bonke. Wayethanda ukunceda icawa ifumane iminikelo yaye wayencede nasekwakhiweni kwenye yeecawa zasekuhlaleni. Akazange ayithande into yokuba omnye woonyana bakhe abe liNgqina. Lo nyana wakhe wayedla ngokummemela kwiintlanganiso zebandla kodwa uMary wayengavumi, esithi ufuna ukuva oko kuthethwa yiBhayibhile ngolwimi lwakhe isiKikuyu kungekhona ngesiSwahili. UMary wade wavuma ukuya kwindibano yesithili yesiKikuyu. Kule ndibano wahlala kwindawo yabantu abasele bekhulile. Wayithanda gqitha indlela awaphathwa ngayo ngobubele. UMary wathi akazange alubone uthando olunje ecaweni yakhe. Waziphulaphula kakuhle zonke iintetho ibe wayithanda into awayivayo. Xa wacelwa ukuba afundelwe iBhayibhile ngencwadana enemifanekiso ethi Listen to God, wakhawuleza wavuma.
Emva kweenyanga ezimbalwa efundelwa, uMary wafuna ukuba liNgqina likaYehova waza wabhala ileta ethi uyayeka ecaweni. Abefundisi babevutha ngumsindo. Babiza umfundisi osuka kwikomkhulu, iNairobi, ukuze athethe naye. Lo mfundisi wacenga uMary ukuba angayishiyi icawa, kodwa akazange agungqe. Lo mfundisi wambuza wathi: “Iza kuba ngoobani abahlobo bakho xa ushiya icawa? Unabahlobo kunye nabamelwane abaninzi abahamba aph’ eRhabe.”
UMary wathi: “UYehova neengelosi baza kuba ngabahlobo bam. NamaNgqina aza kuba ngabahlobo bam.”
Wathi xa ebona ukuba uMary akajiki, lo mfundisi wemka. UMary uqhuba kakuhle kwisifundo sakhe seBhayibhile ibe uya kuzo zonke iintlanganiso zamaKristu, nangona ehlala kude kunendawo ezingenela kuyo. Kutshanje, ukhe akayifumana into yokumsa kwiintlanganiso, ngoko uye wahamba iiyure ezimbini enethwa yimvula ukuze zingamphosi. Nangona echaswa ngabamelwane bakhe, uzimisele ukufikelela usukelo lwakhe lokubhaptizwa.
ELiberia: Kulungiswa izitulo zeSikhumbuzo. Ngo-2013, abavakalisi abayi-6 148 bakuvuyela ukuba kunye nabantu abayi-81 762
Umfundisi Wamwisa Ngabom!
UAshton yintwazana ena-14 ehlala eCameroon. Xa waqalisa ukufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova, wachaswa kanobomi ngumomkhulu notamkhulu wakhe ahlala nabo. Babemnyanzela ukuba aye nabo kwicawa Yomoya. Ngenye imini ebudeni benkonzo, umfundisi wayebek’ izandla abo babezile, ngaloo ndlela edlulisela oko bakubiza ngokuba ngumoya, owawubawisa. UAshton zange awe yena. Umfundisi wamthandazela kaninzi, kodwa waqhubeka emi nkqo. Ngoko umfundisi wamwisa ngabom! Xa efika endlini, wachazela umomkhulu notamkhulu wakhe kodwa abazange bamkholelwe. Le ntwazana yagqiba ngoko ukuba ayibe iphinde ilibeke ecaweni. Sithethanje intsapho kunye nabamelwane baka-Ashton basamchasa, kodwa uqhubeka esiya kwiintlanganiso eHolweni yoBukumkani.
Isimemo Esize Nomntwana
Nakuba wayeneenyanga eziyi-17 ubudala, uAnilpa wayelikhuthalele iphulo lokumemela abantu kwindibano yesithili yonyaka odluleyo eAngola. UAnilpa yayinguye owayenkqonkqoza eminyango aze anike abanikazi-mzi izimemo ngoxa umama wakhe wayechaza ngokufutshane isizathu sokutyelela kwabo. UAnilpa wayengalindi nokuba umama wakhe agqibe ukuthetha, wayehamba aye kunkqonkqoza kwindlu elandelayo. Babemthanda abanikazi-mzi. Ngokomzekelo, ngosuku lokugqibela lwendibano kweza ibhinqa elithile kuye lisithi: “Kunini ndikukhangela. Tyhini ndiyavuya kaloku ukukubona, ndimenywe nguwe kaloku apha.”
Babedikwe Kukuphathwa Kakubi
NgoAgasti 2012, abavakalisi beBandla laseAntaviranambo, eMadagascar, badibana neqela labantu abathi bafuna ukuba ngamaNgqina kaYehova. Aba bantu babephethwe kakubi ngabefundisi, ababefundisa enye into baze benze enye. La marhamente athi iicawa zawo zazingawafundisi iBhayibhile ibe zazingenazo iincwadi zokucacisa iinkolelo zawo. Imali yenkongozelo yayininzi, kungekho mntu uhoye omnye nothando lwamaKristu lungabonakali. Aphinda athi wona amaNgqina kaYehova awanazo ezi ngxaki.
Kamva eli qela labhalela iofisi yesebe. Ileta yayisithi: “Sifuna ukunazisa ngomnqweno wethu wokufuna ukukhonza uYehova. Kodwa ingxaki kukuba sihlala kude. Abanye bethu kufuneka bahambe iiyure ezisithoba ukuya kutsho kweziyi-15 xa besiya kwiintlanganiso. Siyanicela nisithumelele umntu oza kusifundisa iBhayibhile. Asinakukwazi ukwanelisa umnqweno wethu wokukhonza uYehova ngeentliziyo zethu zonke ngaphandle kokuba nisithumelela umntu oza kusinceda siqinise uthando lwethu ngaye. Singabantu abayi-215 abasuka kwiilali ezintathu. Sasihamba iicawa ezahlukahlukeneyo, kodwa ngoku sonke sifuna ukukhonza uYehova ngeentliziyo zethu zonke. Sinethemba lokuba niza kusinceda.”
Abazalwana bahamba iiyure ezisithoba ukuya kwilali yokuqala ukuze badibane neli qela. Apho baqhuba iintlanganiso ibe kweza abantu abanomdla abayi-65. Abanye abantu abakwezinye iilali bakuva oko yaye bathi nabo bayafuna ukutyelelwa baze bafundiswe iBhayibhile. Aba bazalwana bahamba iiyure ezine ezingakumbi ukuze babe neentlanganiso kwilali yesibini, apho kweza abantu abangaphezu kwabayi-80. Kule lali badibana nabantu abacela ukuba baze nakweyabo ilali, ekwakufuneka babethe ngezikatshiwo iiyure zibe mbini ukuya kuyo. Abazalwana bavuma, ibe baba neentlanganiso nalapho. Kweza abantu abangaphezu kwabayi-50.
Amatyeli amabini, abantu abangaphezu kwabayi-30 abasuka kwezi lali baya kwiindibano eMahanoro, uhambo lweentsuku ezintathu ukuya nokubuya. Abayi-25 kubo baya nakutyelelo lomveleli wesiphaluka. Kwakukho izibini ezitshatileyo, iintsapho nabantu abasele bekhulile. Babehlala endlwini enye, bexubusha ngezinto abazifundileyo bebuza nemibuzo kude kube sezinzulwini zobusuku. Aba bantu bezi lali bathi kukho abantu abangakumbi abafuna ukukhonza namaNgqina kuba badikwe kukuphathwa kakubi ngabefundisi.